Intente yeTeepee yabantwana.
I-Teepee yabantwana ngumbono omuhle wokuhlobisa ikona yokudlala yabantwana bethu okanye isipho somhla wokuzalwa. Iintente zinomgangatho weklasikhi, zithungelwe kwilaphu lekotoni okanye kwilineni kwaye zigqityiwe ngekotoni yokucoca. Sinezinto ezininzi zoyilo kunye neemodeli - siza kudala amantshontsho enkwenkwe nentombazana.
Izinti zepayini zenza isakhelo sicaba kwaye zigudile, kwaye zifihliwe kwimigudu ethungelweyo ezantsi. I-Teepee yabantwana, efumaneka kwivenkile yethu ekhompyutheni, yenziwa ngendlela yokuba inokuthi ifake yonke indawo isebenzisa umtya omdaka ngeebhlukhwe. Iintente zineendonga ze5 kunye nesiseko sepentagonal, ezenza ukuba zizinze kwaye zikhulu kune teepee enesiseko sesikwere. Zonke iimodeli zinefestile esekhohlo.
Senza iintente ePoland, ubukhulu becala kwimveliso yasekhaya. Sikhathalela zonke iinkcukacha kunye nomgangatho ophezulu. Ivenkile ye-tipi ekwi-intanethi ibandakanya imiyalelo kunye nesiciko secephe labantwana. Ukongeza, abantu abathenga intente yabantwana, Ivenkile ye-Intanethi iyakunceda ukhethe i-teepee mat ekhuselekileyo, efumaneka kuyilo ezahlukeneyo. Siyakumema ukuba uzonwabise kwihlabathi lethu.
I-Teepee intente ene-frills "i-frills yomgubo"
Intente yeTepeepee ngee-frills "shabby chic"
I-Teepee intente ene-frills "abantu"
Intente yelinen yeTepe "ilineni yendalo"
"I-Marsala" yelinen ye-teepee intente
Intente ye Teepee "Iimpompo eziGrey"
Intente yeTipi "Jeans"
Intente ye Teepee "Ipela epinki"
"I-Biel" yelinen ye-teepee intente